Inotsigira uye zvinopesana nekuvhura zvigaro mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Chimwe chezvinhu zvine hunyanzvi hwekuvhura kana kuvhara nzvimbo mumisika yemari inoumbwa kuburikidza nerutsigiro uye kuramba. Asi isu tinonyatso kuziva here izvo zvinomiririrwa nenhamba idzi? Eya, isati yatsanangurwa kwayo chaiko, zvichave zvakafanira kuziva kuti idzi pfungwa dzepamusika wemusika chishandiso chinoshanda kwazvo mu kuongorora kwehunyanzvi yemisika yemari. Kusvika padanho rekuti ivo vanopinda nechakanaka chikamu chevashoma nepakati varimari kugadzirisa yavo portfolio yekuchengetedzeka.
Mukati meichi chirevo chizere, zvinogona kutaurwa kuti rutsigiro iri yakavimbika kwazvo nhanho yemutengo iri pazasi pemutengo wazvino. Zano rayo nderekuti simba rekudzikira rinogona kudzikiswa uye nekudaro mutengo unowanza. Mukuwedzera zvakanyanya kana kushomeka zvakanyanya zvichienderana nemitero yakawanda yemusika wemasheya. Kuve mune chero mamiriro ezvinhu pokutangira kutanga mashandiro mumisika yemari, kunyangwe kubva kune dzimwe nzvimbo dzine hukasha kupfuura zvakajairwa mune aya kesi.
Iyo data inoonekwa seyakavimbika kwazvo uye isingawanzo kuverengerwa uye ndiyo mhinduro kune iyo mutemo wekugovera uye wekuda yekuchengetedzwa kwakanyorwa pane epasi rose equices indices. Nemahara ezvishoma zvegumi zveeuro kuti usazokanganisa mukutsvaga kwako kwechokwadi. Hazvishamise kuti iri bhuku rekunongedzera iro rinoteverwa zvakanyanya nechikamu chikuru chevamiriri vemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
1 Tinotsigira uye resistors
2 Nguva yeiyi technical technology
3 Mitengo pamatanho ekuvhara
4 Maitiro ekushanda neaya manhamba?
5 Kutengesa pamatanho ekutsigira
6 Nyore kududzira
Tinotsigira uye resistors
Kuramba, pane kudaro, kunoumba kufamba kunopesana neicho chinomiririrwa nerutsigiro. Ndokunge, iwo mutengo pamusoro pezvazvino uye kuti nekudaro simba rekumusoro rakanga rasimukira kusvika zvino richapedzwa. Nekudaro, kukosha kwesangano rakakosha iri kunogara muchokwadi chekuti kana chikapfuurwa padanho rino rakakodzera, mukana wekudzokorodza wakanyanya kukosha. Vakamirirwa nenhamba yakanaka yevashambadzi vadiki nepakati kuti vatange mashandiro avo mumisika yemari. Nemafambiro anowanzo kuvimbika uye akaomesesa zvekukanganisa.
Kune rimwe divi, muyenzaniso wesimba iri mune izvi zvehunyanzvi zviratidzo zvinobva pane zvinotevera chinhu chatiri kuzotsanangudza pazasi. Nekuti mukuita, tsigiro kana kuramba kunowana a simba rakakura iyo yakawanda nguva yakaedzwa pasina mutengo wakadonha kana kusimuka kubva padanho riri mubvunzo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru chekuvimbika kwayo kuva nesimba rakanyanya uye chinoshanda kuwedzera kana kubvisa masheya kune portfolio yekudyara yakagadzirwa kusvika zvino.
Nguva yeiyi technical technology
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveaya akakosha manhamba mumusika wemasheya zvinobva pachokwadi chekuti sekutsigirwa kana kuramba gara kwenguva refu Parizvino inofungidzirwa kuti maitiro avo anowedzera zvakanyanya. Mune mamwe mazwi, ichave iine hukuru hwekukoshesa kugona kupfuura mune mamwe mamiriro ane zvakafanana maitiro. Iko kupi zano rakanakisa richava rekutenga kana kutengesa machengetedzo kuti aite purofiti kana kuchengetedza nzvimbo dzawo mumisika yemari. Pamusoro pehumwe hwakawanda hunyanzvi hwekufunga mune avo akasarudzika nzira dzekudyara.
Chero zvazvingaitika, inofanirwa zvakare kuratidzwa kubva panguva ino zvichienda kuti iyi kirasi yezviverengero, yakajairika mune chero hunyanzvi hwekuongorora, haina hanya neyakaenzana yavo nekufamba kwenguva. Mupfungwa yekuti kuramba kana rutsigiro rwakatora nguva yakareba rwune mukana uri nani kwazvo wekukunda unokunda kubva padanda rakakosha iri. Saka manje ichaona kukurumidza kuti ive nayo, imwe nzira kana imwe. Zvekuti kana iwe uripo, iwe unogona kutora danho uine yakawanda nharo kupfuura kusvika zvino. Icho chinhu chaunofanira kukoshesa kubva ikozvino zvichienda mberi uye ichi chinhu chinofanira kusimbiswa.
Mitengo pamatanho ekuvhara
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa kubva ikozvino ndechekuti zvese zvinotsigira uye zvinopesana zvine simba kushushikana kwepfungwa kubva pamusika wekutengesa maonero. Nezve iyo chokwadi chekuti mutengo wezvikamu zvezvivakwa zvakanyorwa zvinofanirwa kuvhara nguva dzekutengesa pazasi kana pamusoro pematanho aya. Nechinangwa chekuti aya manhamba emusika wemasheya zvisikwa zvigone kugoneswa pamberi pezvinzvimbo uye sarudzo dzevashambadzi vadiki nepakati.
Kune rimwe divi, hazvifanire kukanganikwa kuti aya manhamba anoshandiswa neimwe frequency yekuita kutengeserana mabasa. Ndokunge, nekusiyana kudiki pakati pezvavanotenga uye zvekutengesa uye izvo zvinoda kuwedzera kudzidza kugadzirisa mitengo nemazvo uye zvinobudirira. Hazvishamise kuti, dambudziko rayo hombe riri muchokwadi chekuti iwo mazinga anogona kuve alarm yekunyepa uye anogona kugadzira mamiriro ane njodzi zvakanyanya kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Iko kwavanogona kurasikirwa nemari yakawanda mune iyi mhando yekufamba mumisika yequity.
Maitiro ekushanda neaya manhamba?
Ehe, iko kushanda pamwe nezvitsigiso uye zvinopesana hazvisi zvakanyanya kuomarara uye zvinokodzera chero chimiro chevatengesi. Nekuti zvinoenderana nekumirira mutengo wemari kusvika pamatanho iwayo kuita zano rekudyara uye iro rinogona kunge rakawandisa uye nemhando dzakasiyana, sezvo uchizokwanisa kuongorora kubva panguva dzino chaidzo. Imwe yeiyo mienzaniso yakajairika mukushora mashandiro iri kumirira aya akakosha mazinga kuti apfuudzwe kuitira kuvandudza kutenga uye kuti izvi zvinogona kutotyisa kana mukuunganidza.
Pane kupesana, kana chero chikonzero ichi chiitiko chisingaitike, chingave chiri chikonzero chakakwana bvisa zvinzvimbo mukukosha. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti kururamisa mumitengo yavo kunogona kunyorwa zvakanyanya kubva ipapo zvichienda mberi. Chero zvazvingava, haisi mamiriro ekuvhura zvinzvimbo mumusika wemasheya nekuti une mavhoti ese ekusiya maeuro mazhinji mumugwagwa. Izvo hazvizoshamise zvakanyanya kuti izvo zvekutanga zvitsigiro zvinotsvaga kumisa kudonha mumutengo waro. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi kuongorora uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Kutengesa pamatanho ekutsigira
Iwo mamakanika muzvitsigiro anenge akafanana neanopesana, kunze kwekumwe uye kupesana kudiki. Mupfungwa iyi, zvinowanzoitika kuti aya mazinga mune iwo chaiwo ekushandisa ekushandisa kuitira kuti pasazove nekuderera kweiyo kukosha. Asi kana kune chero mamiriro ezvinhu izvi zvanga zvisina kudaro, hapazove nemushonga asi kuvhara nzvimbo nekuti kudonha kubva panguva ino zvichienda kunogona kunge kwakadzika zvakanyanya maererano nesimba. Kana, pane zvinopesana, ivo vanomira pamatanho aya, inogona kunge iri poindi iyo a nyowani yekuwedzera chikamu mune zvemari zvinhu, zvehukuru kana zvishoma kuderera.
Muzviitiko izvi, muganhu unofanirwa kupihwa mumutengo wakatarwa nevatsigiri nechinangwa chikuru chekusakanganisa kuongororwa uye izvo zvinogona kudzosera kumashure kune wezano anoshandiswa mukudyara kwedu. Zvirinani iwe unofanirwa kupa iyo chidiki chidiki chemasendi mashoma euro mukuchinja kwemitengo. Saka nenzira iyi, hapana zvikanganiso mukuverenga kuti ududzire aya akakosha manhamba mumusika wemasheya. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti aya mashamba emusika wemasheya ari nyore kwazvo kududzira uye kuburikidza negirafu yakavandudzwa ivo vanoonekwa zviri nyore kune chero hupfumi hwekudyara.
Kana iwe ukatevera mamwe emazano aya, hapana mubvunzo kuti iwe uchave uri mumamiriro akakwana ekugadzirisa mashandiro mumisika yemari. Beyond yezano rauchazoshandisa pane imwe nhambo. Chero zvazvingaitika, zvirokwazvo iwe uchagadzirisa mitengo zvakanyanya zvirinani kupinda uye kubuda pane yakasarudzwa mari yemari. Ichi chirongwa chinoteverwa zvakanyanya nemhando dzese dzevashambadzi vadiki nepakati, kubva kune avo vasina ruzivo rwakanyanya murudzi urwu rwekushanda kune avo vanopa kudzidza kwakawanda. Pasina kusiyiwa chero kwerudzi chero rupi zvarwo sezvo zviri zvese nezvazvo, mushure mezvose, kuita kuti iro guta riwane pundutso pamwe nekugona kukuru kubudirira. Kwete zvekare hapana zvishoma.
Chekupedzisira, funga ndechekuti iyi ndeimwe yeanyore masisitimu aunazvo panguva ino ekushandisa nechero mari musika. Unogona kuzviita kubva pakutanga pasina mhando yekuzvidzivirira nekuti haina kana chakaipa chinokanganisa zvido zvako pahukama hwako nenyika inogara yakaoma yemari. Iwe unongo fanirwa kuve wakasimba kwazvo nekushandisa kwemasefa kuti uzviite nenzira kwayo uye pamusoro pese zvakanaka. Hazvishamisi kuti ichi chinofanirwa kuve chimwe chezvinangwa zvako zvakanyanya paunenge uchigadzira ese marudzi emabasa mumisika yequity.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inotsigira uye zvinopesana nekuvhura zvigaro mumusika wemasheya